Asia-akụkọ ihe mere eme | KONGOLISOLO
Mgbapu na Lebanon: Nkwado ojii adịghị mkpa; ndi ojii nke ụwa, ọkachasị ndị Africa bụ ndị a bụrụ ọnụ; ha ka furu ohere iji mechie uzo ihe gbawara nke mere na nso nso a na Lebanon
Site na: KongoLisolona: August 9, 2020 05: 48 Enweghị asịsa
Onye ọ bụla ma ihe mere na Lebanọn. Ọ bụ eziokwu na ọ na-ewute ndị gbawaranụ mere ndị mmadụ merụrụ ahụ, ndị aka ha dị ọcha. N'ụzọ, ịdị n'otu bara uru ...	GỤKWUO